GPS033W - Fanaraha-maso GPS tsy misy rano an'ny OMG Ho an'ny ankizy sy ny ankizy voan'ny Autisme | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny ankizy manana Autism sy ny filàna manokana hafa dia mety tsy am-bava ary mety ho sarotra amin'ny fifampiresahana amin'ny olona. OMG GPS Tracker dia vahaolana fanaraha-maso natao ho an'ny ray aman-dreny autism. Rehefa mandehandeha ny zaza manana Autisme dia afaka mijery ilay toerana ao amin'ny App alaina amin'ny finday avo lenta fotsiny ilay ray aman-dreny. Tsy ilaina ny manomboka miantso polisy na mpifanolo-bodirindrina manandrana mikaroka ilay zaza very.
Miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojia GPS ireo famantaranandro ireo dia afaka milaza ny toerana misy ny zaza amin'ny fahamendrehana mahavariana. Ampiasao ny App amin'ny findainao Smartphone, esory fotsiny ny sari-tany ary ho hitanao ny toerana misy ilay zaza.
Ireo famantaranandro koa dia afaka mandray hafatra am-peo, izay midika fa ny ray aman-dreny dia afaka manoratra hafatra am-peo ary mangataka am-pitoniana ilay zaza autista hiverina an-trano.
Ny fitaovana koa dia miasa toy ny telefaona finday, mamela anao hiantso ilay zaza ary ho tsapanao miadana ny toerana misy azy.
Misy endri-javatra maro hafa tsara izay tonga miaraka amin'ireo fitaovana ireo, miantoka ny fiarovana ny ankizy amin'ny fotoana rehetra. Ny sasany amin'izany dia:
Bokotra vonjy maika amin'ny SOS, azon'ny ankizy ampiasaina raha tsy tratra izy; Misy isa efa voalamina mialoha izay ho fanairana rehefa tsindrio ity bokotra ity.
Fantsom-pifandraisana roa izay mamela ny ray aman-dreny hifandray amin'ilay zaza ary hangataka azy tsy hiala amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Raha ny zaza Autistic, ny feon'ny feo mahazatra dia ampy hamoronana fitoniana, ary ny hafa afaka manatona azy mora foana.
Ny geo-fencing dia manana endrika iray hafa izay tena ilaina amin'ny tranga ny zaza Autistic. Izany dia mamela ny ray aman-dreny hametraka vakim-paritra ao anatiny izay tokony hijanon'ilay zaza. Raha mihetsika ivelan'ny perimeter ity zaza dia alefaso alefa amin'ny telefaona ray aman-dreny.
GPS + AGPS + LBS + WIFI eo amin'ny sarintany
Cell phone APP na sehatr'asa GPRS amin'ny ordinatera, fomba roa hifehy ny fiambenana.
GPRS real-time mahita, manara-maso sy manara-maso (Voice Care)
Fiverenan'ny antso an-tariby roa
Fampiofanana ny ankizy aloha
Antso vonjy maika amin'ny SOS
Fampitandremana amin'ny Batemy
ID Fitaovana ABS + PC
Screen IPS screen
Arovy ny tady Silicon strap
Color Pink, manga
Size (MG) 232 * 42 * 17mm
Battery Zintin'aratra 5.0V
Fotoana fohy 4 ora
Battery TOSIKARATRA 3.7V
Karazana bateria Class battery batterie A
CTP TFT mikasika CTP TFT mikasika
IC chipeset Unité centrale MTK 9820E
feo Ring Eny
gazety eny 0916high miteny mahay
Mic-telefaonina eny 4.0 * 1.5 mic phone
Dock Earphone dock NO
Fiarandalamby Magnetic charge
Sarin'ny karatra SIM Nano SIM
IO port 2pin
Camera Yes 30W
Sensor G-sensor Eny
Esory ny fisehoan-javatra Light sensor NO
Other Antenna Ampidirina an-tariby GSM
Network / fatorana GSM 850 900 1800 1900
Map location GPS Eny
Jereo ny Info Icon horonan-tsary ho an'ny tsirairay Eny
Boky Phone YES (nomeraon'ny nomeraon'ny 10)
App IOS + Android） Antso an-tsary Eny
Fifandraisana roa Eny, tsy manelingelina ny isan'ny olon-tsy fantatra
Voice monitor Eny
Fotoana fohy Fitaovana fianarana
Geo-fefy 3 misy
Image Ampidino ny sary azo alaina ao amin'ny fakantsary na ny rakikary
Alarm alert SOS sy bateria ambany, fefy Geo
Manan-tantara 1 data manan-tantara hita
Alefaso indray ok to play back the historic route
marina LBS, 100-500meter, WIFI, 30-50meter, GPS 5-10meter
Fomba fanaraha-maso ny batterie Eny
Fotoana mafana miaraka amin'ny aterineto Eny
12292 Total Views 17 Views Today